A key Zimbabwe opposition leader was killed Wednesday night in a helicopter crash in the United States, authorities said. Roy Bennett, an outspoken critic of longtime Zimbabwean President Robert Mugabe , who was forced to resign in late November, died when a helicopter crashed in a remote area of
Robert Mugabe has resigned as the leader of Zimbabwe after more than 30 years in power, according to a statement read by the speaker of the country's parliament. The speaker read a letter reportedly from Mugabe, in which he said he was resigning immediately and voluntarily in an effort to ensure a
Robert Mugabe , Zimbabwean President, who at 93 is the world’s oldest head of state, is not planning on giving up his 37-year rule anytime soon. He ignored a noon deadline Monday to resign or face impeachment proceedings. The army, which took de facto control of the country last Wednesday, has him
Thousands of Zimbabweans marched through the capital on Saturday demanding that President Robert Mugabe step down, days after the military placed the longtime ruler under house arrest. Euphoric crowds gathered near the State House where Zimbabweans cheered, danced, waved flags and hugged soldiers
Zimbabwe's President Robert Mugabe showed no signs of loosening his iron grip on power Friday as he appeared in public for the first time since the military apparently took control this week. Clad in blue and yellow academic robes with a cap, the 93-year-old leader presided over and delivered a
Zimbabwe's military apparently seized control of the southern African nation overnight, deploying tanks to the capital, taking control of the state-run broadcaster and confining longtime leader Robert Mugabe to his residence. An established Zimbabwean journalist, who spoke to ABC News on condition
The World Health Organization (WHO) rescinded its appointment of Zimbabwean President Robert Mugabe as a "goodwill ambassador" for health after days of searing criticism and global outcry over the decision. The WHO's director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, said in a statement today he decided
2nd US Doctor Accused of Illegally Killing Lion in Zimbabwe
A second U.S. doctor has been accused by Zimbabwe officials of illegally killing a lion in April, but the doctor's attorney says “those reports are not accurate,” and that his client was at home in Pennsylvania that month and participated in a "lawful" hunt there in July. Zimbabwe's National Parks
The Zimbabwe Conservation Task Force has apologized after claiming that a lion named Jericho, which they said was the "brother" of Cecil, was shot and killed by a hunter, and now says the lion is "alive and well." "I would like to sincerely apologise for my last report where I stated that Jericho
More Zimbabwe NewsMore Zimbabwe VideosMore Zimbabwe Photos